ရွှေမန်းသူလေး အပိုင်း (၁) – အပြာစာအုပ်များ
ရွှေမန်းသူလေး အပိုင်း (၁)
November 4, 2017 kolusoe0Comments
ကျနော်တနင်္ဂနွေနေ့စလုံးက ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ဇာတ်လမ်းက စတယ်လို့ဆိုရမယ်။ကျနော်ပြန်ရောက်ရင်လုပ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ထဲလေ့လာရန်ဆိုပြီး မနက်က အိမ်ကနေစောစောထွက်လာခဲ့တယ်။ အမေက အိမ်က ကားကိုယူသွားဖို့ပြောတာတောင်ကျနော်ယူမလာခဲ့ဘူး။ရောက်ခါစဆိုတော့ကားပြန်မမောင်းရဲသေးတာက တစ်ကြောင်း။ ကားမောင်းရင်ကိုယ်ကြည့်ချင်တာတွေ
ကြည့်လို့မရတော့မှာ ဆိုတာက တစ်ကြောင်းပေါ့။ အဲဒါနဲ့လိုင်ကားနဲ့ပဲဆူးလေကိုထွက်လာခဲ့တာ။
အိမ်ကထွက်မလာခင်တော့အမေ့ကိုမေးခဲ့ရသေးတယ်။ ဘာကားစီးသွားရင်ကောင်းမလဲလို့လေ။ အမေကပြောတယ် ”ပါရမီအထူးပဲစီးသွား ..အဲဒါက မြို့ကို ပတ်နေတာဆိုတော့သားတစ်ခါထဲနေရာစုံရောက်တာပေါ့တဲ့ ”။ အမေ့စကားဆိုတာ မပယ်ရှားကောင်းဘူး မှတ်လား။ ကျနော်လဲကားမှတ်တိုင်မှာ ပါရမီအထူးကိုပဲစောင့်စီးခဲ့တယ်။အမယ် …ကြားဖြတ်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးများ တယ်တိုးတက်နေပါလား။ ကားမှတ်တိုင်တောင်ကျကျနနဆောက်ထားတဲ့သံဖရိန်အမိုးကာ အဆောက်အဦးလေး ဖြစ်နေတယ်။ ထိုင်ခုံလေးတွေကအစီအရီနဲ့။ ကွမ်းတံတွေးနဲ့အမှိုက်ထည့်ရန်ဆိုတဲ့အမှိုက်ပုံးကလဲ အသင့်ဗျ။ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။
အမှိုက်ပုံးမှာအမှိုက်တွေ ပြည့်နေတာတောင်မသိမ်းသေးတာရယ်။ ရှိတဲ့ထိုင်ခုံလေး လေးငါးလုံးမှာ နှစ်လုံးကိုဂျာနယ်ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးက နေရာဦးထားတာက လွဲရင်ပေါ့လေ။ ချိုင့်တွေ ခွက်တွေ အပြည့်နဲ့ကတ္တရာလမ်းကိုတော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူး₍ အ ဟီး။ကျနော်လဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလေ့လာနေတာပေါ့လေ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲပါရမီကားက ဆိုက်လာတယ်။ ကားပေါ်မတက်ခင်ဆူးလေသွားတာ ဟုတ်လား မဟုတ်လားကြည့်လိုက်တော့ကားရှေ့မှန်အပေါ်မှာ ipay ဆိုပြီး ရေးထားတာ သွားတွေ့တယ်။ သြော် .. ဒါအမေပြောတဲ့ကားကိုကတ်နဲ့စီးရတဲ့စနစ်ပဲကိုး ဆိုပြီး သဘောကျသွားတယ်။
ကျနော်က ကတ်မရှိတော့ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ပဲစီးရတော့မှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့စပယ်ယာကို ပိုက်ဆံပေးမယ်လုပ်တော့ကိုယ့်ရှေ့ကတက်သွားတဲ့ကောင်မလေးက စပယ်ယာကိုကတ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာ တွေ့တယ်။စကတ်ထမိန်ဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးက ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့်လေး ဖြစ်နေတာရယ်စပ်စုချင်တာရယ်နဲ့အထဲကိုတိုးမ၀င်သေးပဲခပ်တည်တည်နဲ့ရပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဟိုက် ..စပယ်ယာရဲ့ လည်ပင်းမှာ စက်ကလေးတစ်လုံး ဆွဲထားတယ်ဟ။ ကြည့်လိုက်တော့ကင်မရာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့။ ခုနက ကောင်မလေးပေးလိုက်တဲ့ကတ်ကိုစက်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူကကောင်မလေးကို ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ အင် .. သူ့ဟာက ဒီလိုကြီးလား။ တော်သေးတယ်။ စပယ်ယာကသူ့ဖာသူလုပ်ပေလို့ပေါ့။
ဒီပြင်သာဆိုအစောက ကောင်မလေးက စပယ်ယာနားကပ်သွားပြီးရင်ပတ်ကစက်ကိုကတ်နဲ့ထိပွတ်ဆွဲရမှာ။ ခွိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်နဲ့သုံးလို့ရတာကိုကအဆင့်မြင့်လာတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော် .. အ ဟီး ။ ကျနော်လဲကျသင့်ငွေကိုပေးလိုက်ပြီး အစွန်ကထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး လိုက်လာခဲ့တယ်။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့။ ဆူးလေ ရောက်တော့ဆင်းပြီး ဟိုငေး ဒီငေးနဲ့လျှောက်သွားမိတယ်ပေါ့လေ။
အဲဒါနဲ့ပဲအချိန်နှစ်နာရီလောက်ကြာတော့လမ်းလျှောက်ရတာ ခြေထောက်ညောင်းတာနဲ့အိမ်ပဲပြန်လာခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ပါရမီမစီးနိုင်တော့ဘူး။ ဗိုက်ထဲက တကျုတ်ကျုတ်မြည်နေတာရော၊အမေ့လက်ရာလေး စားချင်တာကြောင့်ရော တက်စီပဲ ငှားစီးလာခဲ့တယ်။ အံမယ်။ တက်စီစီးလာရင်းနဲ့မှစဉ်းစားမိသေးတယ်။ တက်စီကလဲ ငါ့နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်လို့။ ဘာတဲ့နာမည်ကိုက ကျူကျူဆိုပါလား။
အ ဟီး။အဲ .. အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေက အပေါက်ဝက ဆီးစောင့်နေတာ တွေ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ဘာဟင်းချက်လဲလို့မေးမယ်ပြင်တုန်းရှိသေး အမေက ..₃ သား ပြန်လာတာ အတော်ပဲ.. အခုပဲ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဖုန်းဆက်တယ် …“အမေ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲအပြင်ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်ကျနော်ကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိပြီဆိုတာရိပ်မိတယ်။
ဘာလဲ.. အမေ .. ဘာကိစ္စဖြစ်လို့လဲ …“ အေး .. ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ကပြောတယ် … အမေတို့တတ်နိုင်ရင်ညနေ လာခဲ့ပါလားတဲ့ .. သူတို့က
အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ ခရီးထွက်ရမယ်ပြောနေလို့ ..“အမ် .. ဟုတ်လား အမေ .. ဒီနေ့ညနေဆိုတော့ ..“ ဟုတ်တယ် … သား .. အမေလဲ အဲဒါကိုပဲပြောမလို့ .. ဒေါ်ယဉ်ယဉ်တို့ကလဲ အားနာနေတာ ..ဟိုဘက်က အလုပ်ကိစ္စကလဲ တော်တော်အရေးကြီးနေလို့ပါတဲ့ …“ အင်းလေ … ဒါဆိုတော့လဲ သွားကြတာပေါ့အမေရယ် .. အခုတော့ထမင်းစားကြတာပေါ့ ..“ရတယ်လေ .. သား .. ထမင်းပွဲက အဆင်သင့်ပဲ .. အဲဒီကိစ္စကိုပြောချင်လို့ .. နောက်ပြီးကားလက်မှတ်ရဖို့က ရှိသေးတယ်မှတ်လား ..“အမေပြောမှကျနော်လဲ ဘာဖြစ်လို့အမေက အပေါက်ဝကနေ ဒီစကားကိုဆီးပြောရတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။
အာ .. အမေကလဲ .. ရန်ကုန်မန္တလေးများ ကားတွေက ပေါလို့ … စိတ်ပူမနေနဲ့ … ကျနော်ပိုင်ပါတယ်အမေလဲ ကျနော့်ရဲ့ ရဲရဲကြီး အာမခံစကားကြားတော့ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲ နောက်ဘေးဘက်တန်းဝင်သွားတယ်။ ကျနော်လဲ စာပေလောကက၀ယ်လာတဲ့နေ၀င်းမြင့်ရဲ စာအုပ်ကိုစားပွဲပေါ်တင်ရင်းထမင်းစားခန်းထဲ တန်းဝင်လာခဲ့တယ်။ ကျနော်လဲ ထမင်းစားခန်း အဖြတ်အဖေက အိမ်ပေါ်ထပ်ကနေဆင်းလာတာနဲ့ဆုံတယ်။ “အဖေ ထမင်းစားမှာလား₃ ဆိုပြီး လှမ်းခေါ်တော့ “အေး … စားတာပေါ့ လို့ဆိုလို့မိသားစုထမင်းလက်ဆုံစားဖြစ်ကြသေးတယ်။ ၀က်သားနှီချက်လေးကိုသရက်ချဉ်သုပ်လေးနဲ့။
အံမယ်ပဲကြီးဟင်းကိုဆူးပုပ်ရွက်ခပ်ထားတာတောင်ပါသေး။ ငါးပိရည်ချက်နဲ့တို့စရာကတော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ ကောင်းမှကောင်းပေါ့ …….ထမင်းစားပြီးတော့အမေ့ကိုကတိပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အိမ်ကဖုန်းကိုဆွဲပြီးဝရံတာကိုတက်လာခဲ့တယ်။ နှစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲ တယ်လီဖုန်း လိုင်းမမိတာကမပြောင်းလဲသေးတာမို့လိုင်းမိတဲ့နေရာက ပြောရမယ်လေ။ ၀ရံတာရောက်တော့အသင့်ရှိတဲ့ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း ဖုန်းစာအုပ်ထဲက မနဲ့စတဲ့နာမည် (အမ်နဲ့စတာပါ) ကို ရှာလိုက်တယ်။
ကျနော်ရှာနေတဲ့နာမည်တွေ့တာတောင်နာမည်တူက နှစ်ခု ဖြစ်နေလို့နောက်က Travel Agentဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့မှခလုတ်နှိပ်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း အချင်းချင်းခေါ်တာတောင်လိုင်းက ချက်ချင်းမ၀င်ပဲဆယ်စက္ကန့်လောက်ကြာမှလိုင်းဝင်သွားတယ်။
ဟယ်လို …“ ဟယ်လို .. မီးမီးနဲ့ပြောချင်လို့ပါ …“လာထူးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အသံကြားတာနဲ့ကျနော်တွေ့ချင်တဲ့သူကိုပြောလိုက်ရတယ်။ ဆိုင်ကဖုန်းမှန်းသိနေလို့ကျနော်တွေ့ချင်သူဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာ သေချာမသိတာကြောင့်ပါ။တစ်ဖက်က အသံက ခနငြိမ်သွားပြီမှ .. အယ် .. အကိုဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်နေတာလဲ …“ဒီတစ်ခါတော့ဘယ်သူဆိုတာ ကျနော်သေချာသိသွားပြီ။ ပြန်မေးတဲ့ပုံစံနဲ့ချိုမြတဲ့အသံကြောင့်ဒါဘယ်သူဆိုတာ ထပ်မေးနေစရာ မလိုတော့ဘူး။
ဟုတ်တယ်မီးမီး … မနေ့က ပြန်ရောက်တာ …“ဟုတ်လား … အကိုဟိုမှာ တော်တော်ကြာတယ်နော် …“ အေး … ကြာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ …“အ ဟင်း .. အ ဟင်း …. အော် .. ဒါနဲ့အကိုမီးမီး ဆီဆက်တာ …“ဟဲ့ .. နင့်ဆီဆက်မှတော့ကားလက်မှတ်လိုချင်လို့ပေါ့ … ဒါ နင့်ဆိုင်ဖုန်းပဲ မဟုတ်လား …“ ပြော .. အကို .. ဘယ်ကိုလဲ .. မန္တလေးကိုပဲလား ..“ ဟုတ်တယ် .. မန္တလေးကိုပဲ .. ဒီနေ့ညနေ …“ ဟင်.. အကိုကတော့လုပ်ပြီ … ညနေ သွားမှာကိုအခုမှဝယ်ရလား … ဒါနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ..အကိုတစ်ယောက်တည်းလား ..“ ဟုတ်ဘူးဟ .. အားလုံးပေါင်း သုံးယောက် .. အဖေရော အမေရောပါမှာ …“ အယ် .. ဒုက္ခပဲ … နေဦး .. အကို …“တစ်ဖက်က စကားပြောသံ ငြိမ်သွားပြီး သူတို့အချင်းချင်း လှမ်းပြောသံတွေကိုတိုးတိုးလေး ကြားနေရတယ်။
အမတွေရော ညီမတွေရော ရှုပ်နေတာပဲ။ ခနနေတော့မှ ..အကို .. ရိုးရိုး express ကားပဲ ရတယ် … ဖြစ်တယ်မှတ်လား …“အာ .. ရပါတယ် … နင်ကလဲ … expressက ရိုးရိုးမဟုတ်ပဲ ဆန်းတာတွေ ရှိသေးလို့လား ..“အံမယ် .. အကိုနော် .. မြန်မာနိုင်ငံများ အထင်သေးလို့ .. ဒီမှာ Scania တောင်စီးနေကြပြီ …“ ဟေ .. ဟုတ်လား …“ကျနော်နဲနဲအသံကျယ်သွားသလို မျက်လုံးလဲပြူးသွားတယ်။
မီးမီး .. အဲဒါက မရတော့ဘူးလား … ရရင်စီးချင်တယ်ဟယ် …“အကိုကလဲ .. အခုကျမှတော့ဘယ်ရတော့မလဲ .. မန္တလေးက အပြန်ကျမှစီးလာခဲ့တော့ …ဒါနဲ့လက်မှတ်က အကိုလာယူမှာလား …“ အေး အေး .. လာယူမယ်လေ … နင်ဘယ်အချိန်အားလဲ…“ဘယ်အချိန်အားလဲ ဆိုလျှင်တော့အလုပ်ဆင်းမှအားမှာပဲ.. အကိုကမှ ကြိုမပြောတာ ..“နာက်ဆုံးစကားတွင်လိုင်းမကောင်းလို့ပဲလား ကျနော်ပဲ နားကလေးသွားလို့လား မသိ။ မီးမီး အသံကနဲနဲတိုးသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ မီးမီးဆိုတာကလဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျနော်ရဲ့ ဂျီတီစီမှညီမလေးများစွာထဲက တစ်ယောက်ဆိုတော့အချိန်ရရင်တော့တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။ သို့သော်လဲ … အေး .. ဒါဆိုလဲ အကိုအခုပဲ လာယူလိုက်မယ် …နင်မအားရင်လဲမန္တလေးက ပြန်ရောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ …“ဟုတ် .. ဒါဆို ဒါပဲနော် … အကို … ဒီမှာ ဖုန်းတွေ မြည်နေလို့ ..“ကျနော်အားနာသွားတယ်။ မီးမီးတို့ခရီးသွား အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက နာမည်ကြီးမို့အလုပ်များတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိနေတယ်လေ။ တခါ သွားတွေ့တုန်းကဆိုသူမမှာ ဖုန်းနှစ်လုံးကိုတောင်ဘယ်ညာကိုင်ပြီး ပြောနေတာလေ။
အး .. အေး .. ဆောရီး .. မီးမီး .. နောက်မှပဲ …“ကျနော်ဖုန်းပြောပြီး အောက်ပြန်ဆင်းလာတော့အမေ့ကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတွေ ထည့်နေတာတွေ့တယ်။ ကိုရီးယားစောင်တစ်ထည်ကိုခေါက်နေရင်းက ..သား .. ဘယ်လိုလဲ .. ကားလက်မှတ်ရလား …“အာ … အမေကလဲပိုင်ပါတယ် .. ဆိုမှ …“ကျနော့်စကားကြားတော့အမေက ပြုံးတယ်။ ကိုယ့်သားအကြောင်း သိနေသူမို့ဆက်မမေးတော့ပဲစောင်ကိုပဲဆက်ခေါက်နေတယ်။ ကျနော့်မှာ ဆက်မေးရင်လေကန်မယ်ပြင်ပြီးမှအမေကသူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေလို့အတော်ကသိကအောင့်ဖြစ်သွားတယ်။ အမေတွေများ အခက်သား။
သားဖြစ်သူပြောတာတောင်နားမထောင်ချင်ဘူး။ ဒါတောင်ဟိုယူစက်မှာ ရှိနေတဲ့မွေးစားအမေမပါသေးဘူး။ သူလဲအတူတူပါပဲ …. အ ဟီးအောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဝင်းဟာ ရွှေအိုရောင်ညနေခင်းရဲ့ အရိပ်တွေထဲမှာ အလွန်တရာစည်းကားနေပါတယ်။ ရွှေမန္တလာအဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ချိတ်ထားတဲ့ခရီးသွား နားခိုဆောင်မှာ ထိုင်ရင်း ဟိုဟိုဒီဒီငေးမေနေမိတယ်။ သြော် … ရွှေ့မန္တလာတောင်တော်တော်အောင်မြင်သွားပါလား။ ဟုတ်တယ်။ ကျနော်တို့အရင်တုန်းကဆို ရန်ကုန်မန္တလေး express ကားဟာမြတ်မန္တလာထွန်းလောက်ပဲသိတာ။ အခုကျတော့ရွှေမန္တလာ၊ မန္တလာမေ၊ နယူးမန္တလာထွန်း အစရှိသဖြင့်စုံလင်နေပြီလေ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ မီးမီးပြောတဲ့ Scania ကားတစ်စီး ထွက်သွားတာတွေ့လို့ကျနော်ကအမေ့ကိုလက်ကုတ်ပြီး လှမ်းပြောမိတယ် … မေမေ .. အဲဒါက ဆွီဒင်က ထုတ်တာလေ … အခုရန်ကုန်မန္တလေး ဆွဲနေပြီသိလား …“အမေက ဘာမှ ပြန်မပြော။ သူသိပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြုံးပြီး ခေါင်းပဲညိမ့်ပြတယ်။
ကျနော့်စကားကြားသွားလို့ထင်တယ်။ အမေ့ဘေးက ထိုင်နေတဲ့အဖေက ကိုယ်ကိုကျော်ကြည့်ပြီး ..မင်း .. ဘာမှလျှောက်ပြောမနေနဲ့ .. ပြောတော့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး .. ခုံလေး သုံးခုံတောင်တဆက်တည်းမရဘူး …“ဟင်₍ အဖေ့စကားကြောင့်ကျနော်နဲနဲနင်သွားတယ်။ ဘိုးတော်များ သားဖြစ်သူကိုဘယ်အချိန်ကတည်းက နှိပ်ကွပ်ဖို့ချောင်းနေလဲ မသိဘူး။ အထွန့်တက်တတ်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြန်ပြောမယ်ပြင်တုန်း ရှိသေး။ ရွှေမန္တလာ 8th Bus နဲ့မန္တလေးသို့လိုက်မယ့်သူများ နေရာ ယူနိုင်ပါပြီဆိုပြီးကြေညာတဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ်။ ကျနော်လဲ ယောက်ျားကြီး တန်မဲ့အဖေ့ကိုမျက်စောင်းပဲ ထိုးနိုင်ပြီးကားပေါ်တက်ဖို့ထိုင်နေရာက ထလိုက်တယ်။
ကားပေါ်တက်လိုက်ရင်တက်လိုက်ချင်းပဲအေးမြတဲ့အဲယာကွန်းလေက စောင့်ကြိုနေတယ်။တော်သေးတယ်။ ကျနော်က အအေးကြိုက်တတ်တဲ့သူမို့။ အမေကတော့အဖေနဲ့အတူ၇ ၈ မှာဝင်ထိုင်ပြီးပြီးချင်းပဲ အနွေးထည်လေး ထုတ်ဝတ်တာတွေ့တယ်။ ကျနော်လဲအမေနဲ့အဖေ့အ၀တ်အိတ်ကိုအပေါ်တင်ပေးခဲ့ပြီး။ ကျနော့်ရဲ့ခုံနံပါတ်၂၆ ဆီလျှောက်လာခဲ့တယ်။ အဖေ ပြောလဲပြောချင်စရာပဲ။လက်မှတ်ဝယ်တဲ့အချိန်က နောက်ကျနေတော့ခုံနပါတ်တွေက တခြားစီဖြစ်နေတယ်လေ။ခုံနံပါတ်၂၆ ရောက်တော့ဘေးက ဘယ်သူလဲကြည့်လိုက်တယ်။ ခုံက အလွတ်ဖြစ်နေတာ တွေ့တော့နဲနဲတောင်ပျော်သွားတယ်။ မိုက်လှချည်လား။ ငါတစ်ယောက်တည်း စီးရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတွေးလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ကလူနဲ့ဘေးကလူတွေကို ကြည့်တော့လူ့အပြည့်ဖြစ်နေတာတွေ့တယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မလာသေးတာနေမှာပေါ့ဆိုပြီး စဉ်းစားရင်း ကျနော့်လက်ဆွဲအိတ်ကိုအပေါ်ကစင်ပေါ်ထိုးတင်ပြီး ကိုယ့်ခုံမှာပဲဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ်။
လမ်းဟိုဘက်က ခုံမှတော့ဘွားတော်တစ်ယောက်နဲ့ချာတိတ်တစ်ကောင်ထိုင်နေတယ်။ အသက်ကြီးကြီး မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုက်ကြီးကြီးမို့ချာတိတ်တောင်ချောင်ကပ်ထိုင်နေရတာ တွေ့တယ်။ ဘုရား .. ဘုရား ..ငါ့ဘေးနား လာမယ့်သူက ဒါမျိုးကြီး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ ပြောရရင်ဒေါ်လေးဆိုတာတွေကိုကျနော်က ဟိုနှစ်ယောက်လောက်မကြိုက်ဘူးလေ။ အဟီး။ အလကား အဖွားကြီးတွေ .. ခွိဝင်ထိုင်ပြီး တော်တော်ကြာတဲ့အထိကျနော့်ရဲ့ ခရီးဖော်က ရောက်မလာသေးဘူး။ အင်း။နောက်ပဲကျတာလား။ မလာပဲ မလာတော့တာ့လား။ ဒါမှမဟုတ်လမ်းကပဲ တက်မှာလား မသိဘူး။မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေးတုန်းကလဲ အမေက ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ့်ဘေးကလူဘယ်သူလဲဆိုတာတောင်ကျနော်မသိလိုက်ဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ညလုံး ဘေးနားမှာရှိနေမယ့်သူတစ်ယောက်မို့စိတ်ဝင်စားမိတဲ့သဘောပါ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမကိုကျနော်မြင်လိုက်တာပါ။ မြင်မြင်ချင်းပဲစိတ်ဝင်စားမိတယ်လို့ဆိုရမယ်။ တကယ်လဲသူမက ကျနော်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှအောင်မိုက်နေတယ်လေ။ မြန်မာဝတ်စုံလို့ပြောရင်ရမယ့်ခရမ်းရောင်ရင်ပုံးနဲ့ထမိန်ကို ၀တ်ထားတဲ့သူမဟာ တစ်ယောက်ထဲကားပေါ်ကိုအခုမှတက်လာတဲ့အတွက်ထင်းထင်းရှင်းရှင်း ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်စိတ်ဝင်စားမိတာက မိန်းမလှလေးဖြစ်နေတာထက်
သူမရဲ့ အသွင်အပြင်ကြောင့်လို့ပြောရမှာ။ကြည့်လေ။ သူမက ခရမ်းရောင်ဇာခေါင်းစည်းပုဝါလေးကို ခေါင်းမှာ ချည်နှောင်ထားပြီးနေကာမျက်မှန်အ၀ိုင်းတစ်လက်ကို နဖူးပေါ်က ဆံနွေတွေကြားမှာ ဒီအတိုင်းထိုးတင်ထားတယ်။
ခရမ်းရောင်မင်းသမီးလေးပေါ့။ နေကာမျက်မှန်က တပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲဒီအတိုင်းခေါင်းမှာ ထိုးထားတာဖြစ်လို့မျက်နှာဖူးဖူးလှလှလေးက အရှင်းသားပေါ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမက ကားနောက်ဘက်လျှောက်လာလို့ကျနော်အကြည့်ကိုမျက်နှာကနေ အောက်ဘက်ကို နဲနဲဆင်းလိုက်တယ်။ ခရမ်းရောင်ရင်ပုံးအက င်္ျီဟာ လက်စကလေးနဲ့ဖြစ်ပြီး လက်မောင်းကနေ တောက်လျှောက်က ဇာပါးလေးသာဖြစ်နေတယ်။ အဲ .. လမ်းလျှောက်မှသတိထားမိတာ။ သူမ၀တ်ထားတာ ရိုးရိုးထမိန်မဟုတ်ပဲထမိန်စကတ်ပါလား။ ခြေအကြွမှဝင်းခနဲဖြစ်သွားတဲ့ခြေသလုံးသားလေး ပေါ်သွားလို့အကွဲလေးနဲ့ပဲလို့တွေးလိုက်သေးတယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေ ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ သူမတစ်ယောက်တည်းက မတ်တပ်မို့အားလုံးသော ခရီးသည်တွေရဲ့မျက်လုံးက သူမအပေါ်ရောက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကတော့ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ ကျနော်သူမကိုကြည့်နေရင်းနဲ့တစ်ယောက်သောသူကိုသွားမြင်ယောင်တယ်။ ဒီကောင်မလေး ပုံစံကြည့်ရတာ ၀င်ဦးရဲ့ မောင်တို့ချယ်ရီမြေထဲက ခင်သန်းနု ဒီဇိုင်းပါလားလို့။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော ၀တ်ပုံစားပုံရောက
ခင်သန်းနုသကြ င်္န်မှာ ရုပ်ဖျက်ပြီး ရေပက်ခံထွက်တုန်းက ပုံစံနဲ့သွားဆင်နေတယ်။ (ကိုကြပ်ငချွတ်လေးလို့ပြောတာ မခံချင်လို့မေသန်းနုတောင်မလုပ်ပဲ ခင်သန်းနုလုပ်ပစ်လိုက်တယ် .. နောက်မကျေနပ်ရင်တင်တင်မူတွေ ၀ါဝါ၀င်းရွှေတွေလာဦးမယ် …အဟီး)အဲ.. ကျနော့်နားရောက်တော့လမ်းလျှောက်တာရပ်သွားတယ်။ ဗုဒ္ဒေါ .. ငါ့ရဲ့နံပါတ်၂၅များလား။
ကျနော်ထင်တာ မလွဲပါဘူး။ “နဲနဲလောက်₃ ဆိုတဲ့ခပ်တည်တည်နဲ့စကားသံလေး အဆုံးမှာ ကျနော်ထပြီးတော့လမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ ရှေ့ကလူက ခုံကိုနဲနဲနောက်လှန်ထားလို့သူမ၀င်သွားတဲ့အချိန်မှာခြေထောက်က တော်တော်ယို့လိုက်ရတယ်ထင်တယ်။ ခြေသလုံးသား ၀င်းဝင်းလေးတွေတော်တော်ပေါ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ကွက်တိချုပ်ထားတဲ့ထမိန်စကတ်ကြောင့်တင်သားပြည်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေးတွေတောင်ဖောင်းထလာသလိုပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲနောက်ဘက်ကနေ“အဟွတ်အဟွတ် ဆိုပြီး ချောင်းဆိုသံကြားလို့ကျနော်မလုံမလဲနဲ့မျက်နှာလွှဲလိုက်ရတယ်။
ကြည့်လိုက်တော့အလယ်လမ်းဟိုဘက်နှစ်ခုံကျော်က ကုလားဒိန်ဆီက ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ထဲကနဲနဲဘုသွားပြီး ကျိတ်ကျိန်ဆဲလိုက်သေးတယ်။ ခွေးမသား ကုလားပေါ့။ မြန်မာပြည်လာပြီး တော်တော်ရောင့်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့₍ ကျနော်ပြန်ဝင်ထိုင်ပြီးပြီးချင်းပဲ ကားက စထွက်ပါတယ်။ အစောက မေတ္တာသုတ်ဗောဇင်သုတ်တွေဘာတွေ ထည့်ထားတဲ့ခွေလဲရပ်သွားပြီး သူတို့နောက်ထပ်အခွေတစ်ခွေထည့်တယ်။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေးဖြူရဲ့ ဘဂ င်္လားပင်လယ်အော်တဲ့။ ကျနော်လဲ အဲဒါနဲ့အင်္ကျီအိတ်ထဲကအိုင်ဖုန်းကိုထုတ်မနေတော့ပဲတီဗီကိုသာ လှမ်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ မျက်စိစောင်းပြီး ဘေးနားကိုကြည့်တော့ကျနော့်ရဲ့ ခင်သန်းနုလေးက အပြင်ကိုငေးနေတာတွေ့တယ်။ လိုက်ပို့တဲ့သူကိုများနှုတ်ဆက်တာလားလို့ရောယောင်ပြီး ငေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှမတွေ့ပါဘူး။
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျနော်အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူရှူပြီး သာသာလေး မှုတ်ထုတ်မိတယ်။ ငါ့နှယ်နော် ….မှန်ဘက်ကိုကပ်ပြီး လမ်းမကိုငေးနေလို့ကျနော့်ရဲ့ခင်သန်းနုလေးကိုအားမနာတမ်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဆံပင်လေးတွေကိုခေါင်းစည်းပုဝါနဲ့သိုင်းဆီးထားလိုလည်ဂုတ်သားဝင်းဝင်းလေးတွေက နဲနဲပေါ်နေတယ်။ ကောင်မလေးက မဖြူပါဘူး။ ညိုတယ်လို့လဲပြောလို့မရဘူး။ ၀ါဝါ၀င်းဝင်းလေးလို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်။ အလဲ့ဝတ်ထားတဲ့အက င်္ျီကအပါးစားပါလား။ကျနော်သေချာကြည့်မိမှသတိထားမိတယ်။ ကောင်မလေးက ဘော်လီမ၀တ်ပဲ ဘရာဝတ်ထားတာဗျ။နောက်ကျောဘက်အင်္ကျီသားက အကြည်သားလို ဖြစ်နေလို့ ကြိုသေးသေးလေးနဲ့အနက်ရောင်လို့ထင်ရတဲ့ဘရာလေးရဲ့အရာက ပေါ်နေတယ်။ ဘယ်လိုဟာလေးလဲဟ။ ရိုးရိုးလေး မိုက်နေတယ်လို့ပဲဆိုရတော့မယ်။
အမှန်က ဒါမျိုး အင်္ကျီဝတ်ရင်မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဘော်လီပဲ ၀တ်ကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုတစ်ယောက်က ဇာဘော်လီမမစန်းဆိုပြီး ရေးတာလေ။ အခုကျနော့်ရဲ့ ခင်သန်းနုလေးကြမှဇာဘော်လီနဲ့မဟုတ်ပဲ ဇာဘရာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ် .. ခွိ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ဖြုတ်ကြည့်မှသိမှာပဲ။ ၀တ်ထားတဲ့ဘရာပြောတာပါ။ တခြား မတွေးကြပါနဲ့. အ ဟီး။ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့နဲနဲကြာသွားမှသတိရသွားတယ်။ ကောင်မလေးက ရှေ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်မလာသေးပဲလမ်းမဘက်ကိုပဲ ငေးနေတာဗျ။ ကိုယ်ကလဲတစောင်းလေးလို ခပ်ယို့ယို့လေး ဖြစ်နေတာ။ ကျနော်စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူစိမ်း ယောက်ျာလေး တစ်ယောက်နဲ့ထိုင်ရလို့များ တမျိုး ဖြစ်နေတာလား။ အင်း ..ငါ ဘာလုပ်ပေးရပါ့မလဲ။ တကယ်ဆိုကျနော်လဲ ကိုယ့်သိက္ခာကိုကိုယ်ထိန်းတဲ့သူပါ။
ထိုင်တာတောင်မှအချို့သောယောက်ျားလေးတွေ ထိုင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကားပြီး ပစ္စည်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးထိုင်နေတာမဟုတ်။ တကယ်လို့အဲဒီလို ခြေကားယား ထိုင်နေတာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။ အခုတော့ …အဲဒီအချိန်မှာ လေးဖြူခွေက စာမျက်နှာ၁၅ ကိုရောက်သွားတယ်။ ဒီသီချင်းကြတော့ခင်သန်းနုလေးကပြတင်းပေါက်ကနေ ရှေ့ကိုလှည့်လာတယ်။ အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ကျနော်က ..
ညီမ ထိုင်ရတာ အဆင်ပြေလား …“အတတ်နိုင်ဆုံး ချိုသာစွာ မေးရင်း ကောင်မလေးတွေ ကျတတ်တဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ကျနော်ပြုံးပြလိုက်တယ်။အမယ်။ သူမကတော့ခပ်တည်တည်ပဲ။ မျက်လုံးလေး ၀င့်ကြည့်ယုံကလွဲလို့ဘာမှမပြောဘူး။
အဲဒါနဲ့ကျနော်ကပဲ ဆက်ပြောရတယ်။ဟိုလေ … ထိုင်ရတာ အဆင်မပြေရင်ခုံလဲပေးမလို့ပါ …. ဟိုရှေ့က ခုံနံပါတ်၇ ၈ မှာ ထိုင်နေတာ အကို့အဖေနဲ့အမေပါ … တကယ်လို့စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်တယ်ထင်ရင်အကို့အမေနဲ့နေရာချင်း လဲပေးပါ့မယ် …“ခင်သန်းနုအသေးစားလေးက အခုကျမှကျနော့်စကားကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ထင်တယ်။ပြုံးသလိုလို မပြုံးသလိုလိုမျက်နှာပေးနဲ့ .. ရပါတယ် … ကျွန်တော်နေတတ်ပါတယ် … ခင်ဗျား အဖေနဲ့အမေကိုအားနာစရာပဲ …မလုပ်ပါနဲ့ ..“ကျနော်ကသာ ချိုချိုသာသာ ပြောပေမယ့်သူမအသံက တိုတိုတောင်းတောင်း ဖြစ်နေတယ်။ ဟွန်း ..ထားလိုက်တော့။ ပြောပုံဆိုပုံကလဲ ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ .. ဘယ်လိုလဲဟ။ ငါ့တသက်မှာဘယ်ကောင်မလေးကမှ ငါ့ကို ခင်ဗျားလို့မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ငနာမလေး။ ငါကလဲမလဲချင်တာနဲ့အံကိုက်ပဲ။
အဲဒီဘေးမှာသာ ထိုင်ပြီး ငါကြည့်တာ ခံနေပေတော့ …။အမှတ်၃ လမ်းမကြီးရဲ့ လမ်းဆုံရောက်တော့ကားက ခနရပ်တယ်။ ကျနော်လဲ နဲနဲ ရေငတ်လာသလိုဖြစ်တော့ကားပေါ်မှာ အဆင်သင့်ပေးထားတဲ့ရေဗူးကို ဖွင့်သောက်မိတယ်။ ရေငတ်ရတာလဲအကြောင်းရှိတာကိုး။ ဘေးနားက ခင်သန်းနုအသေးစားကလုပ်နေတာလေ။ ကျနော်ရေသောက်ပြီးပြန်ချတော့သူမကလဲ ရေဗူးကိုလှမ်းယူတာ တွေ့တယ်။ ဘာလဲဟ။ ငါလုပ်သလိုလိုက်လုပ်နေတာလား။ကျနော်လဲသူကမှဘ၀င်ဆိုတော့ကိုယ်ကလဲ ဘ၀င်ပဲပေါ့ဆိုပြီး ဂရုစိုက်မနေပဲ လေးဖြူကိုသာ
ဒီမှာ …“လှမ်းခေါ်သံကြားမှကျနော်လှည့်ကြည့်မိတယ်။ ရေပုလင်းကိုကျနော့်ဘက်ထိုးပေးထားတာတွေ့ပြီး ..₃ ကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရလို့ .. ပုလင်းအဖုံးက လည်လည်ထွက်နေတယ် …ခင်ဗျား ဖွင့်ပေးပါလား ..“ကျနော်လဲဘာမှမပြောပဲ ပုလင်းကိုသူမလက်နဲ့မထိအောင်လှမ်းယူလိုက်ပြီး ကောက်လှည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ သူမပြောသလို ပုလင်းအဖုံးက လည်လည်ထွက်နေလို့လက်နဲ့တော်တော်ထိန်းပြီးဖွင့်ယူလိုက်ရတယ်။ ရတော့မှ ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ခင်သန်းနုက အခုမှ .. ကျေးဇူး ..“ လို့ပြောပြီး သူ့ချောင်ဘက်ပြန်ကပ်သွားတယ်။ ကျနော်လဲဘာမှပြောမနေတော့ပါဘူး။လေးဖြူကိုဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ပုလင်းဖုံးဖွင့်ပေးတာလောက်နဲ့တော့မိတ်ဆွေ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။
တခြားဟာ ဖွင့်ပေးရရင်တော့တမျိုးပေါ့ .. အဟီး။ခနခန မှောက်တယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေး အမြန်လမ်းမှာ ရွှေမန္တလာကားကြီးဟာ ငြိမ့်ငြောင်းစွာခရီးဆက်နေတယ်။ အချိန်တစ်နာရီလောက်ကျော်လာပြီမို့လူတွေလဲ လေးဖြူကိုသိပ်အာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ အပြင်ဘက်ငေးဖို့ကလဲ ဘယ်ကြည့်ကြည့်လယ်ကွင်းတွေပဲဆိုတော့သိပ်ပြီးမထူးခြားတော့ဘူး။ ငိုက်တဲ့လူက စငိုက်လာပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲကားစပယ်ယာက လေဖြူကိုထုတ်ပြီးနောက်ထပ်အခွေတစ်ခွေကိုထည့်လိုက်တယ်။ ကျနော်လဲ .. ဘာများလဲဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ဗမာကားတစ်ကား ဖြစ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကိုပြောတာပါ။ သဇင်အပိုင်း ၁ ၂ ၃ တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ဇာတ်လမ်းစပြီး ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာရင်ပဲ ပြနေတဲ့ဗမာကားရဲ့ အဆင့်အတန်းကိုကျနော်သိသွားတယ်။ အင်း။ တိုးတက်တဲ့အထဲမှာ တို့ဗမာကားတွေ မပါသေးရှာဘူးပဲ။ တခါလာလဲ မဲပြာပုဆိုးမဲပြာထမိန်ဖြစ်နေတယ်။ မင်းသမီး ကြည့်ရအောင်လဲ အေးမြတ်သူက ဘေးနားကခင်သန်းနုလောက်တောင်ဒီဇိုင်းက မမိုက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီထဲမှာ ရှိတဲ့မန်ဘာတွေထဲမှာအေးမြတ်သူတော့မပါဘူး ထင်ပါရဲ့ ။ ခွိ။ ပါခဲ့ရင်လဲ ဆောရီးပါနော်။ ကျနော်က လောလောဆယ်ခင်သန်းနုလေးကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ပါ။
အဲဒါနဲ့ကျနော်အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့အိုင်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ညာဘက်ဘောင်းဘီအိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့နားကျပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ကို နဲနဲစောင်းလိုက်ရတာမို့ခင်သန်းနုလေးနဲ့နဲနဲပိုနီးသွားတယ်။ ကားထဲမှာ ဖြန်းထားတဲ့ရေမွှေးနဲ့နဲ့မတူတဲ့သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တစ်ခုကိုရတယ်။ သေချာလေ့လာခွဲခြမ်းချင်ပေမယ့်တမျိုးထင်သွားမှာ စိုးလို့နားကျပ်ရတာနဲ့ကိုယ်ကို ပြန်မတ်လိုက်တယ်။အိုင်ဖုန်းမှာ တပ်လိုက်ပြီး ယူကျူက ဒေါင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျနော်မျက်စိပင့်အကြည့်မှာ ခင်သန်းနုလေးက ကျနော်လုပ်နေတာကိုငေးနေတယ်။ သူ့စိတ်ထဲ ကျနော်ကအချဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကောင်မလေးရယ် … မင်းက အခုမှသိတာလား။
တကယ်ဆိုကိုယ်လဲဝင်ဦးလောက်မဖြောင့်တာတောင်ပြနေတဲ့ဇာတ်ကားထဲက မင်းသားလုပ်တဲ့ငကြောင်ထက်တော့သာပါသေးတယ်ကွယ် .. အ ဟင်း .. အ ဟင်း …“အဲဒါ … One Direction အဖွဲ့လား …“ကျနော်က One Thing ဆိုတဲ့သီချင်းကို ဖွင့်လိုက်တော့နားထဲ မေးသံခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။ဘယ်ဘက်က နားကျပ်ကို ဖြုတ်ပြီး ခင်သန်းနုဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကအရင်လို မဟုတ်ပဲ ဖော်ရွေတဲ့အနက်တွေ ဆောင်နေတယ်။ ကျနော်လဲ ချိုချိုသာသာပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူပေမယ့်လေးစားရမယ်မဟုတ်လား။ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီပေါ့လေ။
ဟုတ်တယ် .. ဒါ နာမည်ကြီး သီချင်းလေ .. One Thing လေ .. ကြိုက်လို့လား …“ဟုတ် .. ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် … ခင်ဗျား …အဲဒီအမ်တီဗီဘယ်က ရတာလဲ …“ယူကျုက ဒေါင်းထားတာလေ .. အကို့မှာ နောက်တစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ် … What makes you beautifulဆိုတာလေ ..“အယ် .. တကယ် … ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ် …“သန်းနု မျက်နှာလေးက ၀င်းခနဲ ဖြစ်သွားပြီး ပျော်သွားတယ်ထင်ရတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပါဟ။ မင်းအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မျက်နှာကြီး တင်းထားတာ မကောင်းပါဘူး ကလေးရယ် …။ဟို .. ဟိုလေ .. အဲဒီသီချင်းနှစ်ပုဒ်ကျွန်တော့်ပေးပါလား ..“ ဟေ .. မင်းကိုပေးရမယ် …“ ဟိုလေဗျာ … အဲဒီမှာ blue tooth ရှိ်တယ်မှတ်လား .. အဲဒါနဲ့ပို့လို့ရတယ်လေ … “
အဲဒီတော့မှကျနော်သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဥာဏ်ကြီးရှင်မလေးပဲ။ ပုံစံကသာ အဖွားကြီး ပုံစံဖမ်းထားပေမယ့်ခေတ်တော့လိုက်မီသားပဲလို့။ အိုကေလို့ပြောပြီး ကျနော်ဆက်တင်ထဲကအပြာကောင်ရဲ့သွားကိုလိုက်ရှာလိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမက လက်ကိုင်စလင်းဘတ်အိတ်ထဲကနေသူမဖုန်းကိုထုတ်တယ်။ အလဲ့။ သူကလဲ မခေဘူး Samsung နဲ့ပဲ။ အင်း။ သူက ဆန်ဆောင်း ကိုယ်ကအိုင်ဖုန်းဆိုတော့မူပိုင်ခွင့်အတွက်တော့မဖိုက်ရလောက်ဘူး ထင်တာပဲ။ ကောင်မလေးရယ် ..တကယ်တော့ကိုယ်က မင်းနဲ့ဖိုက်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟင် … ကျနော့်အတွေးကြီးက တမျိုးကြီးဖြစ်သွားလို့ဆက်မတွေးတော့ပဲသူမရဲ့ ဖုန်းကိုသာ ရှာနေလိုက်တယ်။ဟော .. ရပြီ။ ဘေးချင်းထိုင်နေတာမို့အဆင်ပြေပြေပဲ တွေ့လိုက်တယ်။ သီချင်းနှစ်ပုဒ်စလုံးကိုရွေးပြီးရှယ်ပေးလိုက်တယ်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့သူမက “ရပြီ ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ပြီးတော့“ကျေးဇူးပဲ₃ ဆိုပြီး ထပ်ပြောတယ်။
ဒီတစ်ခါ ကျေးဇူးပြောတာကတော့ပထမတစ်ခါထက်ပိုပြီးအသက်ဝင်နေတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒီလိုနဲ့ကျနော်တိှု့နှစ်ယောက်ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ပဲ One Direction အဖွဲ့ကောင်းမှုနဲ့နဲနဲစကားပြောမိသွားကြတယ်။ နဲနဲလဲ ခင်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကျနော်က သိပ်ပြီးလိုက်ရောတယ်ထင်မှာစိုးလို့သူမနောက်ကြောင်းကိုတော့မမေးဘူး။ နာမည်ကိုလဲ သူမပြောမှပဲ ဆိုပြီးမေးမနေဘူး။ သူမစိတ်ဝင်စားတဲ့သီချင်းအကြောင်း band တွေ အကြောင်းကိုသာလိုက်ပြောနေလိုက်တယ်။ ခင်သန်းနုက မခေဘူးဗျ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း တော်တော်များများကိုသိတယ်။ တချို့သူမပြောတဲ့သီချင်းတွေဆိုကျနော်ကြားပဲကြားဖူးတယ်။ နားမထောင်ဘူးဖူး။ ကျနော်လဲ ဘယ်ရမလဲ။ကျနော့်ယူကျုက ဒေါင်းထားတဲ့သီချင်းလေးတွေကိုထုတ်ပြမိတယ်။ ဟဲဟဲ။
သူများ အားကျအောင်ပြောရရင်တော့ယုံမလား မသိဘူး။ ဗမာကား တစ်ဝက်ကျိုးတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့နားကျပ်နှစ်ခုကိုတစ်ယောက်တစ်ခုစီနဲ့တောင်နားထောင်ဖြစ်သွားတယ်။ နဲနဲလဲ ကိုယ်ချင်းကပ်သွားတယ်ပေါ့။ မဆိုးပါဘူး။ဒီအတိုင်းသာဆိုညလုံးပေါက်အိပ်ရေးပျက်လဲ နစ်နာစရာမှမရှိတာ .. အဟီး။ကားရှေ့ခန်းမှာတော့ဗမာကားက ချစ်ကွဲညား ထုံးစံအတိုင်း ကွဲပြီးတော့ညားဖို့ပြန်တာဆူနေပြီ။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာရယ်မဟုတ်ပဲနဲ့၉ နာရီတောင်ကျော်သွားပြီ။ ကျနော်နဲ့ခင်သန်းနုလဲ ပြောစရာစကားမရှိ။ နားထောင်စရာ သီချင်းမရှိတော့လို့ဒီအတိုင်းပဲ ငြိမ်နေရပြီ။ ခင်သန်းနုက အခုအချိန်မှတော့နံရံဘက်ကပ်မထိုင်တော့ပါဘူး။ တည့်တည့်လေးပဲကူရှင်နောက်မှီကိုကျကျနန မှီပြီး ထိုင်နေတယ်။
ခရီးက နဲနဲ ကြာလာလို့ထင်တယ်။ ကိုယ်ကလေးက မတ်မတ်မဟုတ်တော့ပဲ ခပ်လျော့လျော့ဖြစ်နေတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်လဲ လက်ကလေးပိတ်ပြီး သန်းနေတာ တွေ့တယ်။ အိပ်များ အိပ်ချင်နေတာလား။ထိုင်နေတာကိုက ခြေထောက်တွေခပ်စင်းစင်းလေး ကျနော့်ဘက်နဲနဲစောင်းပြီး ချထားတယ်။မျက်နှာလှလှလေးကတော့ ပြနေတဲ့ကားကို ကြည့်တယ်လဲ မဟုတ်မကြည့်ဘူးလဲ မဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ငေးနေတယ်။ ကျနော့်ဘက်ကိုသူမမျက်နှာရောက်နေတာမဟုတ်လို့ကျနော်သူမကိုသေချာကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။
လှတာတော့တော်တော်လှတဲ့ကောင်မလေးပဲ။ မန္တလေးသူအမိုက်စားလေးပဲ။ သူမ ၀င်ထိုင်တုန်းကမတ်တပ်ရပ်ပြီး နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာမို့သူမ အရပ်အမောင်းကိုသတိထားမိတယ်။ ငါးပေရှစ်မြင့်တဲ့ကျနော့်ထက်ခေါင်းတစ်လုံးသာသာလောက်ပဲနိမ့်တယ်ဆိုတော့ငါးပေလေးလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ငါးပေကျော်ရင်ပဲဟုတ်လှပြီလို့ပြောရမယ့်အချိန်ဖြစ်လို့သူမကအရပ်မြင့်တဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ သို့ပေမယ့်ကိုယ်လုံးက ပြည့်ပြည့်လေးမို့ပိန်တယ်လို့မထင်ရဘူး။အထူးသဖြင့်နောက်ကိုမှီထားလို့မောက်မောက်မို့မို့ဖြစ်နေတဲ့ရင်နှစ်မွှာက ထွးတယ်လို့ဆိုရမယ်။ထမိန်စကတ်ဝတ်ထားပေမယ့်ဆီးခုံနေရာလေးက မို့မို့လေး ဖြစ်မနေဘူး။ ၀မ်းဗိုက်သား
အဆီမထွက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ကြည့်နေရင်း ကြည့်နေရင်းနဲ့ကိလေသာက အလိပ်လိုက်တက်လာတယ် … ဟူး …။
အယ် “ ဆောရီး …“ ရပါတယ်အကို …“ကျနော်အညောင်းဆန့်ပြီး ခြေထောက်ကိုဆန့်လိုက်တော့ကျနော့်ဘက်ရောက်နေတဲ့ပေါင်တံတစ်ဖက်ကိုသွားပွတ်မိတယ်။ ကိုယ့်အထင်သေးသွားမှာစိုးလို့ကျနော်ပဲ အရင်ဦးအောင်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ကားမထွက်ခင်ကဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အခုတော့ကောင်မလေးက သာသာလေး ပြုံးပြီးရပါတယ်လို့ပြောတယ်။ ထူးခြားတာက ခင်ဗျားဆိုတာကြီး ပျောက်သွားပြီး ကျနော်ပြောတဲ့အတိုင်းအကိုဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ ကျနော်ပြောပါတယ်ဘယ်ကောင်မလေးမှကျနော့်ကို ခင်ဗျားလို့မပြောပါဘူးလို့ ..။အဲဒီနောက်တော့သူမက ပုံစံမပျက်ခပ်စောင်းစောင်းလေးနဲ့မျက်စိမှိတ်သွားတယ်။ ပြနေတဲ့ဗမာကားကလဲညားဆိုတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီး ခနကြာတော့ပြီးသွားတယ်။ စပယ်ယာလုပ်သူက ခွေကို ပြန်ထုတ်ပြီးနောက်တစ်ခွေထည့်လိုက်တော့အော်ဒီယို ဖြစ်သွားပြီ။
သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ဟိုက်ဝေးကားသမားတွေအကြိုက်စိုင်းထီဆိုင်ပေါ့။ ဟိုသံယောဇဉ်ခိုင်မာထဲက သီချင်းကစလာတယ်။ တကယ်ပဲမေရယ်ကိုယ်ကတော့ချစ်တာ တစ်ခုပဲသိတယ်ဆိုတာလေ။ အင်း … ခက်တော့ခက်နေပါပြီ။ ငါ့ဘေးနားမှာလဲချစ်စရာ ကောင်မလေးက အိပ်ပျော်နေပြီထင်တယ်။ ကားကြီးတစ်ကားလုံးလဲ တိတ်ဆိတ်လို့။ ကားထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးရောင်ကလဲခပ်မှိန်မှိန်ရယ်။ မကောင်းမှုတို့သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ရာတွင်အရင်းခံသည်ဆိုတော့ …. အင်း …ရော် .. ခက်တော့ခက်နေပါပြီ။ ကြိုက်မရှက်ငိုက်မရှက်ဆိုတဲ့စကားမှာ ဘေးနားက မန္တလေးသူကငိုက်မရှက်ဆိုတာကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပြီ။ ခပ်စောင်းစောင်းလေး ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကလေးကတဖြေးဖြေးယိုင်လာပြီး သူမမျက်နှာလေးက ဘေးကိုစောင်းလာတယ်။ ကျနော်ကလဲ ခင်သန်းနုလေးနဲ့အဆင်ပြေပြီးကတည်းက ကိုယ်က သူမဘက်ခပ်ယို့ယို့ဆိုတော့သူမ ဆတ်ခနဲ အငိုက်မှာ ခေါင်းကကျနော့်ပုခုံးပေါ် ရောက်လာတယ်။
တမင်တကာလုပ်တာလားလို့သူမဘက်အသာစောင်းကြည့်တော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေတာ တွေ့တယ်။ လက်ကလေး နှစ်ဘက်ကတော့စလင်းဘတ်အိတ်ကလေးကို ပိုက်ထားလျက်သားလေး။ဒီအရွယ်ဆိုတာ သွေးသားကောင်းသူမို့သူမလိုမျိုး ကျန်းမာသန်စွမ်းသူအတွက်ခရီးသွားရင်းအိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန်းနေတာက ကျနော်ဖြစ်နေတယ်။ ရင်ထဲမှာ ကောင်းစိတ်နဲ့မကောင်းစိတ်က လွန်ဆွဲနေတယ်။ တကယ်ပါဗျာ။ ကျနော်အခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လူကြပ်ကြပ်ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မိန်းမပျိုလေးတွေနဲ့တိုးစီးခဲ့ရတာတောင်ဘာမှထွေလီကမာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တခါတလေများဆိုရင်ကျနော့်ဖာသာကျနော်ရှောင်အတင်းပြန်တိုးထွက်ပြီးနောက်အပေါက်ကနေ တွယ်စီးခဲ့သူပါ။
ဒါပေမယ့်အခုတော့နှာဝကိုကျီစယ်သလို ဖြစ်နေတဲ့ခင်သန်းနုလေးရဲ့ ရနံ့က ကျနော့်စိတ်ကိုကယောက်ကယက်ဖြစ်လာစေတယ်။ ပိုဆိုးတာက ရွှေမန္တလာတစ်စီးလုံးကလဲ အိပ်မောကြနေတဲ့အလား တိတ်ဆိတ်နေတယ်လေ …။အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမကိုယ်ကလေးက တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သူမများ နိုးတာလားလို့ကျနော်ကကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ မယ်မင်းကြီးမက ကိုယ်ကိုရွှေ့ပြီး မှီလျက်ဆက်အိပ်နေတာ။ အဲ ..ခက်တာက ဒီတစ်ခါ သူမက ခြေထောက်ကို ခပ်ကျဲကျဲထားလိုက်လို့ခွဲထားတဲ့ထမိန်စကတ်နေရာလေးကနဲနဲလေး ဟသွားတယ်။ တခြားသူတွေ မမြင်နိုင်ပေမယ့်ဘေးက ထိုင်နေတဲ့ကျနော်ကတော့ မြင်တာပေါ့။ခြေသလုံးသား ၀င်းဝင်းလေးတွေက ဒူးခေါင်းနားထိပေါ်နေတာကို။ကျနော်တံတွေးကို မြိုချမိတယ်။ ဘယ်ဘက်ပုခုံးကို မှီထားတဲ့သူမကို ကြည့်တော့မျက်နှာဖူးဖူးလေးကအိပ်မောကျနေတုန်းပဲ။ မျက်နှာလှလှလေးကိုတစိုက်မတ်မတ်ကြည့်မိလို့ကျနော်ရင်ခုန်နှုန်းကအရင်ကထက်ပိုမြန်လာတယ်။ အသိစိတ်ကိုထိန်းပြီး အကြည့်ကိုလွှဲကာ ဘေးဘီကို ကြည့်မိတော့ဘေးနားက အဒေါ်ကြီးက ကျနော့်ဘက်ဖင်ပေးပြီး အိပ်နေတာ တွေ့တယ်။ရာဝင်အိုးလောက်ရှိမယ့်
တင်ပါးကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး နဲနဲတော့ဖီးလ်လာနေတာ လျော့သွားတယ်။ ကိုယ့်အခြေအနေကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ဘေးနားကလူတွေကအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့တယ်။ ဘယ်လိုလဲဟ။
ကာလနဂါးအုပ်စုထဲများ ငါလာကျနေတာလား။စိတ်ကိုထိန်းပြီး သူမဘက်ပြန်မလှည့်မိအောင်နေပေမယ့်ပါးချင်းထိမလိုတောင်ဖြစ်နေတဲ့
ခင်သန်းနုလေးရဲ့ ဆွဲဆောင်အားကိုကျနော်တာရှည်မခံနိုင်ပါဘူး။ သိပ်မကြာခင်ပဲ သူမဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။ လှပနုနယ်တဲ့မျက်နှာလေးက ကျနော့်ကိုစောင့်နေတယ်။ ၀င်းဝင်းလေး ပေါ်နေတဲ့သလုံးသားလေးတွေ … အသက်ရှူလိုက်တိုင်း မသိမသာလေး မို့သွားတဲ့ရင်နှစ်မွှာ .. ဒါတွေကိုကသိုဏ်းရှူနေမိတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ဦးပုညပြဇာတ်ထဲက ရေသည်ယောက်ျား ပြည့်ရှင်မင်းကိုသတ်ဖို့ကြံသလို ချီတုံချီချ ဖြစ်နေတယ်။ လက်ထဲကိုင်ထားစရာ သန်လျက်မရှိပေမယ့်ကျနော့်ရဲ့လက်တွေက လေးလေးပင်ပင်အရာတစ်ခုကိုကိုင်ထားသလိုစီးစီးပိုးပိုး ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျနော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုအတင်းမဲတင်းပြီး ချလိုက်တယ်။ ကြောက်ရင်လွဲရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလက်ကိုင်ထားပြီး မျက်ကန်း စိတ်ဓါတ်မွေးလိုက်တယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီးချင်းပဲခင်သန်းနုလေးဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ကို မသိမသာလေးလုပ်ပြီးစောင်းလိုက်တယ်။ သူမ တကယ်အိပ်မောကျနေတာကိုး။ အမှီမပျက်ပဲ ကျနော့်ဘက်ပါလာတယ်။သေချာကြည့်မယ်ဆိုသူမနဲ့ကျနော်က သမီးရည်းစားတွေ ပွေ့ပိုက်ထားသလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ သူမရောက်နေပြီလေ။ ကျနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညာဘက်ခေါင်းစောင်းပြီး ဘေးဘီကို ကြည့်တော့အရာရာကအနေအထားမပျက်ပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ်ချရပြီဆိုတာနဲ့ကျနော်ညာလက်ကိုအသာလေး မသိမသာရွှေ့လိုက်တယ်။ ကျနော့်ဘယ်လက်ကိုတော့ဒီအတိုင်းပဲ သူမတင်ပါးအိအိလေးနဲ့ထိမြဲအတိုင်းထိထားတယ်။ သူမကတော့ဘယ်လိုနေလဲ မသိဘူး။ ကျနော့်ရင်ထဲမှာတော့တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ကို ခုန်နေတာပဲ။
ငါ လုပ်တာ မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ အကြိမ်တစ်ရာမက ပြောမိနေပေမယ့်သူမရဲ့ ပေါင်တံတစ်ဖက်ဆီတိုးကပ်သွားတဲ့လက်ကိုတော့နောက်မဆုတ်မိဘူး။ဘုရားရေ .. ကျနော့်ဘ၀မှာ ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်ဟာ ဒီအချိန်များလား။ ကျနော့်ဘယ်လက်ကသူမတင်ပါးတစ်ခြမ်းနဲ့ထိကပ်နေတာကိုဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့်ညလက်က သူမရဲ့ ပေါင်တံလေးအားထိသွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကိုတောင်ကိုယ်ပြန်ကြားနေရတယ်။ ဒီအချိန်များ နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းရင်ဖော်ပြချက်က ဘယ်လောက်တောင်များ ရှိနေမလား မသိဘူး။ သင်္ကြန်တွင်းမှာအိတ်ဇော်ဖြုတ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တောင်ကျနော့်ရင်ခုန်သံလောက်ကျယ်မယ်မထင်တော့ဘူး။အစပထမတော့ကျနော်ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ပေါင်တံလေးပေါ် ရောက်နေတဲ့ကျနော့်လက်ကိုဒီအတိုင်းပဲထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီငြိမ်နေတဲ့လက်ဟာ မသိမသာလေး
တုန်နေတာ ဆိုတာ တွေ့လိမ့်မယ်။ သေချာတာက ဒါဟာ ရန်ကုန်မန္တလေး အမြန်လမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ နှစ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ကျနော်ခင်သန်းနုမျက်နှာလေးကိုအကဲခတ်ကြည့်မိတယ်။
ကလေးငယ်တစ်ယောက်အိပ်မောကျနေသလိုပကတိအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ပေါ့။ ကျနော်အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီး လက်ကိုသာသာလေး ထိပွတ်လိုက်တယ်။ပျော့ပျောင်းတဲ့အ၀တ်မို့သူမပေါင်တံကို ပွတ်မိတာနဲ့မခြားပါဘူး။ လက်ထဲမှာ ဖိန်းဖိန်းရှိန်းရှိန်းဖြစ်လာရောဗျာ …။မိနစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းမှာ ကျနော်သူမပေါင်လေးကိုအထက်အောက်ရွရွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ခင်သန်းနုလေးဆီကတော့ဘာအရိပ်အယောင်မှ ပြတာ မတွေ့ဘူး။ ကိုယ်ကိုလဲ ရွှေ့တာမတွေ့သလိုတခြားမျက်နှာအမူအယာ ပြောင်းလဲတာလဲမတွေ့ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ကျနော့်ပုခုံးကို မှီလျက်ဆက်အိပ်ပျော်နေတယ်။ ကျနော်လဲ တဖြေးဖြေးလက်ရဲလာတာနဲ့စိတ်ကိုတင်းပြီး လက်ကို ပွတ်ပေးနေတဲ့ပေါင်ပေါ်ကနေ နဲနဲ အတွင်းဘက်ကျကျကိုရွှေ့လိုက်တယ်။ သူမ စကတ်ထမိန်က ဘယ်ဖုံးဆိုတော့အံကိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အထဲကိုရွှေ့လိုက်တဲ့လက်ဟာ ထမိန်သားကို မစမ်းမိတော့ပဲ နူးညံ့တဲ့အသားကိုထိမိသွားတယ်။
တင်းတင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေသလိုအိအိဖြိုးဖြိုးလဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခင်သန်းနုလေးကနဲနဲတွန့်သွားတာ သတိပြုမိတယ်။“ဟင်း .. ဟင်း …“ကျနော်တကိုယ်လုံးမှာ ရှိသမျှ အမွေးတွေ အကုန်ထောင်တက်သွားတယ်။ ခေါင်းနပန်းကြီးတယ်ဆိုတာဒါပဲလားမသိဘူး။ စိတ်ထဲဘုရားစာ ရွတ်မိမလို ဖြစ်ပြီးမှမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီး ပြန်ရပ်လိုက်ရတယ်။ညာဘက်ပေါင်တွင်းကိုထိမိလိုက်တဲ့လက်ကိုကော်နဲ့ကပ်ထားတဲ့အလား ငြိမ်နေအောင်ထားရင်း သူမကိုစောင်းကြည့်မိတယ်။ နိုးများနိုးသွားတာလားလို့။ကျနော်သက်ပြင်းမောတစ်ခုကိုခိုးချပြီး ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ သူမပေါင်ကိုထိထားတဲ့လက်ကို ရုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား .. အင်း.. ခက်တော့တာပဲ။ ခုနက ဒါမျိုးပွတ်ပေးခွင့်မရခင်ကတောင်စိတ်ကနောက်ဆုတ်ဖို့မရှိတာ။ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကိုင်နေရမှတော့ဘယ်လွှတ်ချင်ပါတော့မလဲ။ အခွင့်အရေးယူတာ မဟုတ်ပေမယ့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့လက်မလွှတ်ချင်ဘူး။ မလွှတ်ချင်လို့ပဲကိုင်မိတာ မဟုတ်လား။
တိတ်ဆိတ်အိပ်မောကျနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲကျနော့်မကောင်းစိတ်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအားပေးအားမြှောက်ပြုနေရှာတယ်။
အဲဒါနဲ့ကျနော်အသာလေး ပြန်ပြီး လက်ကိုလှုပ်ရှားမိတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့အ၀တ်ပေါ်က မဟုတ်တော့ပဲပကတိအသားကိုကိုင်ရတာမို့ပိုပြီးတော့ရင်ခုန်စရာ ကောင်းနေတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ဖီလင်တက်လာပြီးကျနော့်ဘောင်းဘီခွကြားထဲက အကောင်က မာတက်လာတယ်။ တော်သေးတယ်။ ကျနော်ကကားပေါ်မတက်ခင်ကတည်းက အတွင်းခံထဲမှာ သကောင့်သားကိုအလျားလိုက်လေးထောင်ပြီးထားခဲ့တော့အခုလို မာတက်လာချိန်မှာ ဂျင်းဘောင်းဘီသားကိုသွားထောက်မနေဘူး။နေရထိုင်ရ မခက်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်သိသာပါတယ်။ဘောင်းဘီခွအပေါ်ဘက်မှာ ဖောင်းဖောင်းကြီး ဖြစ်နေတာကို …။
ကျနော့်လက်ဟာ တဖြေးဖြေး ပွတ်ရင်းပွတ်ရင်းနဲ့အထက်ဘက်ကိုတက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်လိုချင်သလောက်သွားလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကောင်မလေးက စလင်းဘက်အိတ်လေးကိုပိုက်ထားတာက တစ်ကြောင်း၊ သူမစကတ်ထမိန်က အပေါ်မှာ ပြန်သီထားတာက တစ်ကြောင်းကျနော့်လက်ကိုတားထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ့်နေရာလေးကို မရောက်နိုင်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ကသိကအောင့်ဖြစ်နေသလို၊ တံတွေးလဲ ခနခန မြိုချနေရတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ ကြံဆနေမိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပ…ခင်ဗျား … ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ …“ ကျနော့်လက်ကို ဖြတ်ခနဲလာကိုင်တာနဲ့အတူခင်သန်းနုကျနော့်ပုခုံးပေါ်ကနေ ရုတ်တရက်ခွာသွားတယ်။ကျနော်ဘာမှ ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်ဘူး။ ကျနော့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီး သူမက စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ဟို .. ဟို .. ဟိုလေ …“ကျနော့်မှာ လည်ချောင်းတွေကပ်ပြီး နေမကောင်းခါစ လူမမာလိုဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ငါတော့သွားပြီဆိုတာ သိနေတယ်။ ပြသနာပဲ။ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတော့ဖြစ်ပြီ။ဘယ်လိုရှင်းရပါ့မလဲ။ အဖေ အမေသာ သိရင်ဒုက္ခပဲ။ အိမ်ပေါ်က မဟုတ်ပေမယ့်ကားပေါ်ကခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ်ထင်တယ်။ ခင်သန်းနုလေးကိုဘာပြောရမှန်း မသိပဲ ထိတ်လန့်တကြီးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
ဘာမှဟိုဟို ဒီဒီတွေ လုပ်မနေနဲ့ … တကယ်တဲ… လုပ်မယ်ဆိုလဲသေချာလုပ် .. ယားကျိယားကျိနဲ့ရွရွလေး လုပ်မနေဲ့ … ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး₍အမ် ..“ကျနော့်ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားတယ်။ မန္တလေးသူကို မယုံနိုင်အောင်ကြည့်နေမိတယ်။ ငါ့များနားကြားလွဲတာလားလို့။ ဒါမှမဟုတ်သူမကပဲ အိပ်မက်မက်ပြီး ယောင်ပြောနေတာလား။ မျက်လုံးလေးအ၀ိုင်းသားနဲ့ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်နေတဲ့ခင်သန်းနုလေးကြောင့်ဒါဟာ တကယ်ဆိုတာ ကျနော်နားလည်လိုက်တယ်။ တစ်ခုခုပြောမယ်ပြင်တုန်းရှိသေး။ သူမက ကျနော့်ပုခုံးပေါ်ခေါင်းတင်ပြီး
ခုနကအတိုင်း ပြန်မှီလိုက်တယ်။ ကျနော့်လက်ကိုကိုင်ထားတဲ့သူမလက်ကိုလဲ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါ့ထက်ပိုတာက သူမရဲ့ စလင်းဘတ်အိတ်ကိုပေါင်ပေါ်ကနေ ယူပြီး မှန်ပြတင်းဘောင်ဘက်ကိုချလိုက်တာပဲ။ ပြီးတာနဲ့မျက်စိလေးနှစ်လုံးက မှိတ်သွားတယ်။
ဟူရေး ….“စိတ်ထဲမှတော့ပတ္တမြားငမောက်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်း ခလုတ်တိုက်မိတဲ့သူလောက်နီးနီး ပျော်သွားတယ်။ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံနင်းလိုက်တော့ဘယ်ဘ၀က အကျိုးပေးကောင်းခဲ့လို့လားတော့မသိဘူး။ ဆူးပုံကဆူးစရာ ဆူးမရှိတော့ပဲပန်းမွေ့ယာ ဖြစ်သွားပြီ။ ပျော်လိုက်တာ။ ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လျက်ပဲ ကျနော်လက်ကိုသူမပေါင်ပေါ် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။အီ ..“ဒီတစ်ခါတော့ခင်သန်းနုလေး ကိုယ်က တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အရမ်းအသိသာကြီး မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုယ့်တစ်ခြမ်းက ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သလိုဖြစ်နေလို့သာ ကျနော်က သတိပြုမိတာပါ။ ပါးစပ်ဖျားကကြောင်ပေါက်ကလေး ညည်းသလိုအဲဒီအီဆိုတဲ့အသံကိုလဲသဲ့သဲ့လေးသာ ကြားရတာလေ။ အကျယ်ကြီး
မဟုတ်ဘူး။ တိုးတိုးမှတကယ့်တိုးတိုးလေး။ ကျနော်အသာစောင်းငဲ့ကြည့်တော့မျက်တောင်လေးတွေ နဲနဲလှုပ်နေတာတွေ့တယ်။ သဘောကတော့အိပ်နေတာ မဟုတ်ပဲ မျက်စိမှိတ်ပြီးမှေးနေတာပေါ့။
ကျနော်လဲသိပ်အညံ့စား မဟုတ်လို့ခင်သန်းနုလေး ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိလိုက်ပြီ။ဒီတစ်ခါတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပွင့်လင်းရဲရင့်တိုးတက်လာတာ နေရာဒေသ မရွေးပါလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဘန်းကျော်ကိုအကောင်းမြင်တတ်သွားတယ်။ အော် .. ဒီမိုကရေစီိတောင်ရနေပြီမဟုတ်လား။နူးညံ့တဲ့အသားဆိုင်တွေဟာ ကျနော့်လက်ထဲကိုတဖန်ပြန်ရောက်လာတယ်။ terms and condtions
တွေမပါတဲ့ခွင့်ပြုချက်ကို ရရှိထားသူမို့ကျနော်ဒီတစ်ခါတော့လက်ကတော်တော်သွက်နေတယ်။ ခနတာအချိန်အတွင်းမှာတင်နာရီချိန်သီးလွှဲသလိုကျနော်လက်က အပေါ်အောက်ကိုပြေးနေတယ်။ နာရီချိန်သီးနဲ့မတူပဲ တစ်ခုကွာတာက ကျနော့်လက်က အပေါ်ပိုင်းကိုပိုပိုရောက်လာတဲ့အချက်ပါ။ အသားချင်းတူပေမယ့်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အပေါ်ဘက်ရောက်လာလေလေ ပိုကိုင်လို့ကောင်းလာလေလေလို့ခံစားနေရတယ်။ရွှေမန်းသူခင်သန်းနုလေးကတော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး။
တကယ်တော့ခင်သန်းနုလဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ သူမဘက်ကိုလှည့်ကာခေါင်းစောင်းထားလို့ကျနော့်ရဲ့လည်ပင်းကိုလာထိနေတဲ့သူမနှာဝက လေနွေးနွေးလေးတွေကသက်သေပြုနေပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲခပ်ပြင်းပြင်းလေး မှုတ်ထုတ်နေရတယ်ဆိုကတည်းက သူမစိတ်ပါနေတယ်ဆိုတာ ဗေဒင်မေးစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့အတိတိုင်းချုပ်ထားတဲ့ရင်ပုံးအက င်္ျီအောက်ကရင်နှစ်မွှာကလဲ တုန်ခါနေတယ်လေ။ ရှုပ်ပါတယ်ကွာ။ ဒီအဆင့်ထိရောက်မှတော့နောက်ဆုတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ အဓိကနေရာကိုရောက်အောင်သွားတော့မယ်။ စိတ်မြန်လက်မြန်ဆိုတာကျနော့်အတွက်များ ပြောထားတာလား မသိဘူး။ ပေါင်အတွင်းဘက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့လက်က ချက်ချင်းအထဲကိုထိုးနှိုက်ပြီး ၀င်သွားတယ်…။
အဲဒီမှာ …“အကို … ခန … အရမ်းမလုပ်နဲ့ ….ကျွန်တော့်လုံချည်ချုပ်ရိုးတွေပြုတ်သွားမယ် ..“ဟုတ် … ဟုတ် … ဆောရီး …“ခင်သန်းနုလေးက ကျနော့်လက်ကိုကိုင်ပြီး မူသလို နွဲ့သလို ဖြစ်နေတဲ့အသံနဲ့တားရှာတယ်။ သူမအသံကနေပူထဲက ပြန်လာတဲ့လူတစ်ယောက်စကားပြောသလိုမျိုးအတိုင်းပဲ။ မောတယ်လို့ပြောလို့မရပေမယ့်ပုံမှန်လေသံတော့မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အသံက အာလုပ်သံကြီးပါနေတယ်။နောက်ပြီး ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ။ ခါတိုင်းဆိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းက အပြောချိုစကားသွက်တယ်ဆိုတဲ့သူက အခုကျတော့ပါးစပ်ထဲ အာစေးထည့်ထားတာ ခံရသလိုဘယ်ကစပြောရမှန်း မသိဘူး။ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲ မသိဘူး။ကျွန်တော့်ခါးဘေးနားမှာ ချိတ်ရှိတယ် … အဲဒါကိုအောက်ဆွဲဖြုတ်လိုက် … တခြားသူလဲမြင်သွားဦးမယ်နော် …. “ဟုတ် … ဖြုတ်လိုက်မယ် ….“
ချက်ဆိုနားခွက်က မီးတောက်တဲ့အကျင့်က ရှိနေတော့မန္တလေးသူတိုးတိုးလေးကပ်ပြောတဲ့စကားကဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သိတယ်။
ဦးနှောက်က လက်ကိုဘာမှအထွေအထူး ခိုင်းနေစရာတောင်မလိုဘူး။အထဲရောက်နေတဲ့လက်က ချက်ချင်း အပြင်ပြန်ထွက်လာပြီး သူမရဲ့ညာဘက်က ခါးဘေးနားကိုစမ်းတယ်။ဟော တွေ့ပြီ ..မာမာလေး ဖြစ်နေတဲ့ကလစ်လေးလိုခေါင်းကိုစမ်းမိတာနဲ့အသာလေးကလော်ထုတ်ပြီး အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲထင်လို့လား မသိဘူး။ နားထဲ ရွီခနဲ မြည်တဲ့ဇစ်သံကို ကြားလိုက်ရသလိုပဲ။ဒါတောင်သူတို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ စကတ်ဇစ်က ကျနော်တို့ဂျင်းဘောင်းဘီက ဇစ်တွေလိုအမာစားမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ကို မှီထားတဲ့ခင်သန်းနုကိုယ်လုံးလေးလဲဒီအသံကြောင့်ဆတ်ခနဲတုန်သွားရှာတယ်။ မှီထားတဲ့ခေါင်းလေးက ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်လာတာ တွေ့တယ်။ ကျနော်လေဘာလုပ်လဲ သိလား။ ဒီအချိန်ကျမှတော့ရွှေမန်းသူကိုတခြားကိစ္စတွေ စဉ်းစားခွင့်မပေးတော့ဘူး။
ကိုယ့်မျက်နှာနားမှာ ရီရီဝေေ၀လေး လာမော်ကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေး မဟုတ်လား။ ပြီးတော့သူမကလဲအလိုတူအလိုပါပဲလေ။ လူမိမယ်ဆိုရင်တောင်သူလေးလဲ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုထဲ ဆွဲထည့်ရမှာပဲ။ကျနော့်နှုတ်ခမ်းက သူမနှုတ်ခမ်းကိုလာထိမယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့်ခင်သန်းနုလေးကရှောင်မထွက်ပါဘူး။ မျက်နှာကိုမော့ထားတဲ့အတိုင်း ဆက်ရှိနေတယ်။ နွေးခနဲ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုချင်းထိတဲ့အချိန်မှာ သူမ မျက်တောင်လေးတွေ မှေးကျသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျနော်က မျက်စိဖွင့်ထားလို့သိလိုက်တယ်။ မျက်စိကလဲ မဖွင့်ထားလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ ဟိုင်းဝေးမှာ သွားနေတဲ့အိတ်စပရက်စ်ကားကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်တွေက ကစ်ဆင်ဆွဲနေတာကိုး။
အားပါး .. ကောင်းလိုက်တာ .. တယ်လဲ နမ်းလို့ကောင်းတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးပဲ။ သူများတွေတော့မသိပေမယ့်ကျနော်က နမ်းရင်အရသာခံပြီး နမ်းတတ်တယ်။ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်အနမ်းခံရတာ မဆန်းဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
← အိမ်နီးချင်းကောင်း အပိုင်း (၁၉)(ဇာတ်​သိမ်း)
ရွှေမန်းသူလေး အပိုင်း (၂)(ဇာတ်​သိမ်း) →